Nezvedu - HV Hipot Electric Co., Ltd.
SIMBA TEST PILOT
HV Hipot Electric Co., Ltd. yakavambwa muna 2003, ichigara nhaka kubva kuWugao Institute uye Xigao Institute.Ibhizimusi renyika repamusoro-soro, rine angangoita 1500 square metres epamusoro-tekinoroji yakangwara yekuvaka hofisi uye 2000 square metres ye8S yemazuva ano manejimendi nekugadzira chirimwa.
Iyo isimba sisitimu yakabatanidzwa mushandisi ine yakakosha kukwikwidza kwesimba rakazara remagetsi ekuyedza midziyo, isingaparadze live patrol yekuongorora uye online yekutarisa sisitimu dhizaini, kutsvagisa nekusimudzira, kugadzira, simba rakakwira voltage bvunzo uye nzvimbo yekudzidzisa, uye zvakakosha zvakanakira mutengi ruzivo rwekuvandudza uye bhizinesi modhi innovation.
HV Hipot inotungamirwa muWuhan, Hubei Province, ine nzvimbo yekushambadzira yepamba, nzvimbo yekushambadzira yepasi rose, tsvagiridzo yechigadzirwa uye nzvimbo yekusimudzira uye mushure mekutengesa sevhisi sevhisi, vanopfuura makumi masere vashandi, undergraduate kana pamusoro pevashandi vanoverengera makumi masere neshanu muzana ehuwandu hwevashandi, kusanganisira 5 tenzi dhigirii, 2 vanachiremba.
Beijing International Electric Power Equipment uye Technology Exhibition
Asia Magetsi Simba & Smart Grid Exhibition
Shanghai International Electric Power & Electrical Exhibition
Wuhan Bhandi Rimwe Uye Imwe Mugwagwa Technology Exchange Meeting
Iyo Middle East Dubai International Power Show
Iyo ine akati wandei evakuru veR&D mainjiniya, ane gumi emidziyo yemhando inovhara insulation inomira magetsi ekuyedza, transformer yekuyedza midziyo, switch yekuyedza, SF6 yakazara yekuyedza michina, tambo yekutadza nzvimbo yekuyedza midziyo, transformer arrester yekuyedza, online monitoring masisitimu, nezvimwe. , 89 zvigadzirwa zvidiki-zvikamu zveR&D, dhizaini uye kugona kugadzira.Iyo ine ruzivo rwehunyanzvi tekinoroji yekutsigira timu inogona kupa vatengi ne-pa-saiti zvishandiso debugging, kure tekinoroji Q&A tsigiro, uye dzakasiyana siyana dzekushanda kudzidzisa rutsigiro.
VaBernie vanobva kuTMG Test Equipment Australia vanodomwa seTechnical Director.
Mr. Bernie vanounza chiono chemhiri kwemakungwa kukambani iyi, vachiita kuti mashandiro emidziyo yemagetsi aenzane neayo ezvigadzirwa zvepasi rese.
HV Hipot inogara ichisimbirira pakuvaka indasitiri yekuyedza magetsi neakanakisa R&D tekinoroji, macro-indasitiri maonero, hunyanzvi hwebasa zviyero, uye yekutanga-kirasi system zvigadzirwa.Zvinotora hunyanzvi hwemhando dzebhizinesi sehwaro, yakazvimirira R&D uye hunyanzvi kusimudzira kuvandudzwa, uye kusimudzira kwakasarudzika kugadzira brand.Isu takazvipira kuve mutengesi wepasi rose weakangwara magetsi ekuyedza.
Kuchengetedzwa kwemagetsi ndiyo hwaro hwenyika.HV Hipot inoyedza kuongorora kufambiswa kwakarongeka kwehunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji, hunyanzvi hwesevhisi sevhisi uye magetsi ekuongorora ecological innovation, uye ichatora ruzivo rwevatengi uye hunyanzvi hwetekinoroji semabhenefiti ayo akakosha, kuenda kumunda wakafara wekuvaka magetsi, uye kushanda kuchengetedza simba.
Kune ani nani ari kufunga nezvekambani yedu uye zvekutengesa, ndapota taura nesu nekutitumira maemail kana kutibata nekukurumidza.
[Kurume 2003] Yakavambwa Wuhan Guodian High Voltage Technology Research Institute kuti iite simba repamusoro voltage test research.
[Kukadzi 2004] Yakabudirira kugadziridza yakazara otomatiki magetsi frequency inomira voltage test mudziyo weAO Smith, ichigadzira muenzaniso wechirongwa-inodzorwa yakakwira-voltage insulation inomira kuyedza voltage.
[Nyamavhuvhu 2005] Yakagadzira hukama hwehukama neVietnam CSC.Batch yekutanga ye loop resistance metres yakaiswa kuVietnam National Electricity, ichityora iyo monopoly yezvigadzirwa zvemagetsi zvekuMadokero.
[Kubvumbi 2006] Yakapa michina yemhando yepamusoro yekuyedza kuAREVA, imwe yemakambani makuru matatu epasi rose ekutepfenyura uye kugovera magetsi, uye yakabatsira zvine mwero kuindasitiri yekufambisa magetsi.
[Mbudzi 2006] HVHIPOT yakanyoreswa zviri pamutemo.Mugore rimwe chetero, mhando yeHVHIPOT yakanyoreswa, uye kambani yakagadzira yakanangana nekutengesa.
[Kurume 2007] Co-yakaronga Hubei Magetsi Power Measurement uye Testing Association uye akava nhengo yekanzuru.
Muyedzo wekubuda muchidimbu wakaiswa kuAustralia Electric Power Company, uye zvigadzirwa zvakaenda kumisika yeEuropean neAmerica.
Akaenda kunzvimbo yenjodzi yeWenchuan kuti ape michina yekuedza magetsi yeAba Reconstruction Project muSichuan Province uye kutora chikamu mukudzoreredza simba rekununura uye basa rekuyamura njodzi.
[Chikumi 2008] Akawana chitupa cheruremekedzo che "Contract-abiding uye Credit-worthy Enterprise" chakabudiswa ne "Wuhan City Innovative Outstanding Enterprise" naHubei Provincial Administration for Industry and Commerce.
[Ndira 2009] Yakagadziridzwa yakakwirira-chaiyo AC uye DC yekuongorora zvakajairwa zvigadzirwa zveChina Southern Power Grid Yunnan Electric Power Research Institute, uye yakapfuura calibration yeNational High Voltage Metering Station, ichipa yakanyatso kuyedza mwero wekuona voltage divider inoshandiswa ne Yunnan Power Grid.
[Chivabvu 2010] Yakapihwa kunzvimbo yakawirwa nekudengenyeka kwepasi kwaYushu uye yakapa bheti yemidziyo yekugadziridza simba kuYushu Rescue and Disaster Relief Headquarters, izvo zvakabatsira kununura kwaYushu nekuyamura panjodzi.
[Chivabvu 2011] Yakapihwa neHubei Academy yeMagetsi Power kugadzira iyo "Power Grid Intelligent Line Loss Theory Analysis System Drawing Module".
[Zvita 2012] Kunyoreswa kwakabudirira kwechiratidzo cheHV HIPOT kwakaisa hwaro hwekuti Ministry of Foreign Trade ivhure musika.Kubva mukupera kwaZvita, takatambira vaenzi vekunze kubva kunyika dzinopfuura gumi nembiri dzinosanganisira Russia, Iran, South Korea, Vietnam, neUzbekistan.
[Kukadzi 2013] Wuhan HVHIPOT akatamira zviri pamutemo kuchivakwa chehofisi chitsva, Chivako 7, Jinyintan Modern Enterprise Guta, Jiangjun Road, Dongxihu District, ine nzvimbo yehofisi yakazara uye zvivakwa zvehofisi, kuti tigone kuratidza zvizere huso hweWuhan HVHIPOT.Professional service ichakwazisa mangwana ari nani newe.
[Kubvumbi 2014] Vatengi vekuSouth Africa vakauya vachibva kure vakatenga batch yeultra-low frequency AC withstand voltage testers, zvakatora danho rakakosha kuvhura musika wepasi rose.
[Kubvumbi 2015] HVHIPOT yakawana akati wandei ekopyuta software, frequency conversion series resonance test device operating system, high voltage switch dynamic characteristic tester operating system, zinc oxide tester operating system, intelligent loop resistance tester operating system, uye nehungwaru hunomira simba. yenhevedzano yesoftware yemakombuta senge sisitimu yekushandisa yemuyedzo mudziyo inoratidza kuti Wuhan Guodian West High Technology iri kuramba ichikura.
[Kukadzi 2016] Zvigadzirwa zveHVHIPOT zvakabudirira kupinda mumusika wemagetsi enyukireya.Musi wa23 Ndira, pakukoka Zhejiang Hongwei Supply Chain Co., Ltd. kuti vashanyire uye vakurukure zvakadzama nezvekudyidzana kwemidziyo yenyukireya, Zhejiang Hongwei Supply Chain Co., Ltd. Indasitiri yebasa remazuva ano CIMC ibhizinesi rekusimudzira. neplatform-based supply chain management inobatanidza cheni yekugovera chigadzirwa uye sevhisi yekugovera cheni, zvichiratidza kuti kambani yedu yakapinda zviri pamutemo mumusika wemagetsi enyukireya uye inokokwa zvishoma nezvishoma kupinda muyedzo yemagetsi.
[Kukadzi 2017] Kuti ishandire zvirinani indasitiri yekuyera magetsi, Wuhan HVHIPOT yakagadziridza zvakanyanya simiti yayo yekugadzira kuti ienderane neiyo yepamusoro-soro yepasi rose standard GB 50303-2002.Kuwedzera kwakanangwa kwenzvimbo yeR&D, musangano wekugadzira, kusimbaradzwa kwenzvimbo yekuyedza uye yekusimbisa, uye hunhu hwakaomarara kune maitiro ekugadzira, zvakaratidza isingazununguki inotungamira chinzvimbo cheWuhan HVHIPOT muindasitiri yekuyera magetsi.
[Gumiguru 2018] Iyo yakagadziridzwa HVHIPOT Mini Chirongwa yakatangwa zviri pamutemo.Ichi chirongwa chidiki chinonyanya kupa simba-ane chekuita nekuverenga maturusi kune mazhinji emagetsi testers.
[Gumiguru 2018] HVHIPOT yakapinda mu2018 Beijing 17th International Electric Power Equipment uye Technology Exhibition (EP China 2018) ikawana budiriro yakazara.
[Kukadzi 2019] HVHIPOT yakagadziridza 0.02% yakakwirira-chaiyo DC yakajairwa kuramba divider yeHuazhong University of Science and Technology, uye yakabudirira kupasa kuongororwa kweNational High Voltage Metering Station.